Wararka Maanta: Sabti, July 7 , 2012-Shirkii sanadlaha ahaa ee ONLF oo ka furmay Toronto (SAWIRRO)
Shirkaan oo socon doona muddu seddex casho ah ayaa waxaa laguu soo bandhigay khudbooyin, heeso , gabayo khudbad halkaas laga soo jeediyay. Ujeedada shirkaan ayaa ah in jaaliyadaha qurbo-joogta ee ka soo jeeda deeganka Ogaadeeniya ee dalka Itoobiya ka wada tashadaan xaalaadda deegaanka iyo sidoo loo kaalmeynlahaa jabhadda ONLF.
Guddoomiyaha jabahadda xoreynta ee ONLF Admiral Maxamed Cumar Cusmaan ayaa shirkan kaga qayb-galay dhanka Teleconference, wuxuuna warbixin kooban ka bixiyey heshiiska ay dowladda Kenya ku dhex-dhexaadineyso jabhadda ONLF iyo dowladda Itoobiya. Guddoomiyaha ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey heshiiskaas u dhexeeyay ONLF iyo dowladda Itoobiya.
Sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay Maxamed Cabdi Yaasiin (DIIRANE) oo ah hoggaamiyaha abaaulka iyo Arrimaha bulshada ee ONLF iyo xubno ka tirsan golaha dhexe ee ONLF. Shirkan kii ka horreeyey wuxuu ka dhacay Australia.
Caawa ayaa waxaa lagu dhigi doonaa hotelka Sheraton ee magaalada Toronto Riwaayad hal-ku-dhiggeedu yahay "IN UU QAYSHADA MAANTA QASAB BAAN KAGA KEENAY, waxayna riwaayaddu ahayd mid dadkii daawaday ay aad uga heleen.
Haweeney ka socota dalka Sweden waxay ka hadashay Oil-ka sida qaldan looga baarayo dalka Itoobiya. Sidoo kale waxaa ka hadlay mas’uul ka socday xisbiga NDP ee laga soo doorto magaalada Toronto.
Mahad Carabw Cali